Kenya oo u tartamaysa marti-galinta Ciyaaraha Olambikada ee 2024-ka - Sabahionline.com
Kenya oo u tartamaysa marti-galinta Ciyaaraha Olambikada ee 2024-ka
Kenya ayaa ku tala-jirta in ay gudbisato codsi ay ku doonayso in ay noqoto qarankii ugu horeeyay Afrika ee marti-galiya Ciyaaraha Olambikada sannadka 2024-ka, sdiaana waxa Jimcihii (10-kii Agoosto) sheegay wargayska Financial Times.
Ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya oo qado-sharaf u sameeyay ciyaartoyda Olambikada
Ingiriiska oo Kenya ka maal-galinaya koboca tamarta nadiifka ah
"Kenya waxa ay ku kalsoonayd in ay lahayd awoodda ay ku marti-galin karto Olambikada illaa iyo sannadkii 1968-kii," ayuu yiri Raila Odinga oo jooga London. "Waa ruuxaas kan aan doonayno in aan dib u hanano. Waxan doonaynaa in aan dib u soo ceshano isku-kalsoonaantaa oo aan niraahno waannu awoodnaa in aan marti-galinno. Waa muhiim in aan dib u eegno halkii aan ka nimid iyo halka aan rabno in aannu aadno, sababto ah waxannu isku diyaarinaynay muddo dheer," ayuu yiri.
Odinga waxa uu sheegay in kaabayaasha Kenya iyo dhaqaaleheeduba uu "faa'ido badan" ka kasban doono maal-galinta la socota marti-galinta Olambikada.
Guddiga Olambikada Adduunka ayaa muujiyay in ay daneeynayaan ina y codsi marti-galin ka helaan waddamada ka hooseeya saxaaraha, sida ay sheegtay Financial Times. Koonfur Afrika, Qadar, Maraykanka, Moroco, Masar iyo Argentin ayaa sidoo kale loo aqoonsaday in ay yihiin tartamayaal marti-galin kara Ciyaaraha 2024-ka.